Nagu Saabsan - Nantong Guosheng Intelligence Technology Group
Nantong Guosheng Sirdoonka Teknolojiyadda (oo hadda loo yaqaan Guosheng Group) waxay leedahay dhowr hoosaadyo ay ka mid yihiin teknoolojiyadda Guosheng Intelligence Technology, Guosheng Qalabka Mashiinka, Qalabka Guosheng, Warshadaha Suzhou Zhonggu, Tewe Technology Prewei (iskaashi lala yeesho Taiwan), iyo Investa (Sino-German) iskaashi) iwm Guosheng Group waxay diiradda saaraysay garoonka wax soo saaridda mashiinka muddo ka badan labaatan sano.
Ganacsiga shirkadu wuxuu ka yimid qaybaha sare ee qalabka, oo ay kujiraan tuubooyin iyo qaybo alxanka saqafka saxda ah, kuwaas oo la casriyeeyay oo lagu balaariyay laba qaybood oo waaweyn sanadihii lasoo dhaafay. Iyada oo la siinayo qaybo saxan oo bir ah saqafka sare ee qalabka mashiinka CNC, qalabka qaabeynta mudista iyo soosaarayaasha mashiinada injineeriyada sida Demagisson Seiki, Canada Husky, Jarmalka Bomag, iwm, waxaan sameysanay xiriir iskaashi xasiloon oo aan la leenahay macaamiisha heerka sare ah, oo aan ballaarineyno meheradda meheradaha kale ee qalabka sare ee sare sida mashiinka wax lagu sameeyo oo laysku duro. Isla mar ahaantaana, warshadaha mashiinka wax soosaarka ee CNC waxaa laga beddelayaa qalabka mashiinka jirka oo loo beddelayo sumad madax-bannaan oo ah mashiin dhammaystiran, soo saarista iyo sameeynta xarunta warshadaha toosan ee CNC, xarunta mashiinnada bey'adaha, xarunta mashiinnada jiifa, mashiinka caajiska-bullaacadda, CNC lathe, xarunta-isku-wareejinta xarunta, iyo xarunta-isku-xirka xiritaanka shan-gees. Kooxda waxay noqotay soo saare xirfadle ah oo leh qalab makiinad jarjarida birta CNC iyo silsilado warshadeed oo dhameystiran. Waxyaabaha qalabka mashiinka waxaa si weyn loogu isticmaalaa aerospace, caaryada, baabuurta, tamarta, dib u dhiska maraakiibta, mashiinada injineernimada, alaabada korontada ee 3C iyo qeybaha kale ee wax soo saarka. Waxyaabaha qayb ahaan ka mid ah, sida xarumaha mishiinada xawaaraha sare leh iyo mashiinada wax lagu caajiso, ayaa beddeli kara alaabada la soo dejiyo, taas oo kor u qaadday horumarinta warshadaha hoose iyo dhaqaalaha warshadaha ee la xiriira.
Guosheng Group waxay u hogaansan tahay howlgalka shirkada ah "dib u soo nooleynta dalka warshadaha isla markaana ka dhigaya shaqooyin guul", waxay qaadataa "noqoshada soo saaraha ugu caansan ee qalabka caqliga badan ee Shiinaha" sida aragtida shirkada, waxay u hogaansantahay qiyamka aasaasiga ah ee "daacadnimada, tayada, dadaalka iyo hal-abuurka ", waxay u abuurtaa qiimo weyn macaamiisha, waxay la wadaagtaa horumarka shaqaalaha, shuraakada, saamileyaasha iyo bulshada, waxayna ku guuleysataa xaalad guul mustaqbalka.
Shirkadda waalidka ee Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., oo ay ka diiwaan gashan tahay 99 milyan yuan, waa shirkad heer sare ah oo heer qaran ah, oo ka mid ah 30-ka shirkadood ee ugu sarreeya warshadaha mashiinnada mashiinnada, shirkad gaar loo leeyahay oo heer sare ah oo ku taal Gobolka Jiangsu iyo shirkad gaar loo leeyahay oo heer sare ah. shirkad hal-abuur cusub leh oo ku taal Gobolka Jiangsu. Shirkadda waxay sameysay xarumo teknolojiyad injineernimo heer degmo iyo degmo ah, xarunta tikniyoolajiyada ganacsiga ee Jiangsu iyo xarunta ganacsiga qalin jabinta ee Jiangsu. Waxay leedahay injineero sarsare iyo farsamo-yaqaanno badan, waxayna ku guuleysatay casharro badan oo madax-bannaan oo abuuris ah. Alaabtu waxay ku guuleysteen abaalmarinta labaad ee Abaalmarinta Sayniska iyo Tiknoolojiyadda Jiangsu, abaalmarinta koowaad iyo labaad ee abaalmarinta Nantong Science and Technology Progress Award. Shirkadda waxay fulisay mashaariicdii la beddelay ee guulaha waaweyn ee sayniska iyo tikniyoolajiyada ee Gobolka Jiangsu, iyo mashaariicda waaweyn ee cilmiga iyo teknolojiyadda ee Nantong City, iwm.